Myanmar NGO Network အတွက် သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း - CBI Myanmar
Capacity Building Initiative - CBI Reaching the NGO Community Nationwide
Building Capacity for Myanmar Citizens Working in the Social and Development Sector
Networking & Coordination
Networking & Coordination News
Myanmar NGO Network အတွက် သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာအန်ဂျီအိုများ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်စုံညီအစည်းအဝေး၌ Myanmar NGO Network (MNN) နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Myanmar NGO Network သည် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုထိရောက်မြန်ဆန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်၊ အဖွဲ့အစည်းများအကြား သတင်း၊ နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ ဖလှယ်နိုင်ရန်၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့နှင့် ထိရောက်စွာ ကိုယ်စားပြုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ မြန်မာအန်ဂျီအိုများ၏ နည်းပညာ၊ ဗဟုသုတနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များတိုးတက်မြင့်မားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
Myanmar NGO Network ကို ပိုမိုရှင်သန်တက်ကြွ အားကောင်းလာစေရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများက ဆန္ဒရှိကြပါသည်။ အသင်းအား မှတ်ပုံတင်ရေး အတွက်လည်း ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ကြပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ရရှိပြီးသော မြန်မာပြည်သူ့ဖိုရမ် (Myanmar People Forum - MPF) ကို သင်းဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအပိုဒ် (၃၇) အရ မြန်မာအန်ဂျီအိုများ စုပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Myanmar NGO Network) သို့ အမည်ပြောင်းလဲပြီး မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြချက်အရ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအများစုက သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။ MPF ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ (လက်ရှိအမှုဆောင်များ) ကို ဆက်သွယ်အသိပေးညှိနှိုင်းရာတွင် သဘောတူကြောင်းနှင့် ဤသို့လုပ်ရန် လိုအပ်သည်များကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။
သို့ပါ၍ မြန်မာပြည်သူ့ဖိုရမ် (MPF) ကို မြန်မာအန်ဂျီအိုများ စုပေါင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (MNN) သို့ အမည်ပြောင်းပြီး ဆက်လက်ရှင်သန်ဆောင်ရွက်ရန် လူကြီးမင်းတို့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ကို အောက်ပါ Link တွင် ဖြည့်ပေးပါရန် တောင်းခံအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်(သောကြာနေ့) နောက်ဆုံးထားပြီး ဖြည့်စွက်ပေးပို့ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Latest News from CBI
Request Application of Interest (AOI) to ASEAN Civil Society Conference (ACSC)/ ASEAN Peoples' Forum (APF)
SPOT on Facilitation Workshop (December7- 9, 2018)
Request for Expression of Interest GEWE from Italian Agency for Development Cooperation
Invitation for Project Management & Participatory Learning and Action in July,2019
Announcement of Scholarship Opportunity for ACSC/APF 2019 @ Bangkok
Invitation: CHANGE FORUM (December4- 5, 2019 @ Sule Shangri-la Hotel, Yangon)
CBI Networking & Coordination-1 [demo]
CBI Networking & Coordination-2 [demo]
CBI Networking & Coordination-4 [demo]
Announcement of Myanmar Humanitarian Fund (MHF) Standard Allocation US$ 8 million
Room 009, Ground Floor, Building C-1,
Sabae Street (Opposite Township Court),
Yuzana Highway Complex,
Phone:+95 (1) 504451, +95 (9) 45000 3042
Invitation: SPOT on Facilitation Workshop (February 19 -21, 2020)
Focus Training: Skills for Better Cooperation from CSA
Invitation: Creative Thinking & Decision Making Training (21-23, January 2020 and Energizer/Conceptual Game Training (January 24, 2020)
Warm Greetings: Merry Christmas and Happy New Year from CBI !
Copyright © 2018 CBI - Capacity Building Initiative. All right reserved. Developed by Orientwebs
Reaching the NGO Community Nationwide! Building Capacity for Myanmar Citizens Working in the Social and Development Sector.